निकुञ्ज तिवारी काठमाडौं, माघ २
प्रिय, राजधानी काठमाडौं! तिम्रो चरणमा स्पर्श गर्न नपाएको लामो समय भएछ। यसै साता केहि दिनका लागि स्मार्ट मोबाइल बोकेर म तिम्रो स्मार्ट सिटीभित्र पस्दैछु। प्रतिक्षा गर ल!
म एकदमै उत्सुक छु। स्मार्ट सहर हेर्न। स्मार्ट सहरभित्रका स्मार्ट सडक देख्न, स्मार्ट सडकमा गुड्ने स्मार्ट साधन चढ्न। स्मार्ट साधनभित्र यात्रा गर्ने स्मार्ट मानिसहरू हेर्न र ती स्मार्ट मानिसले गर्ने स्मार्ट व्यवहारको महसुस गर्न।
काठमाडौं, तिमी स्मार्ट भएको म हेर्न आउँदैछु। जब म तिम्रो स्मार्ट सहरका लागि प्रस्थान गर्नेछु। तब तिमीभित्रका अव्यवस्थित व्यथितिको दुर्गन्ध मभित्र कुनै पनि हालतमा प्रवेश गर्न पाउने छैनन्। पहिला–पहिला तिम्रो सहरका लागि यात्रा सुरू गर्दा मभित्र छट्पटाउने द्विविधाका शंका उपशंका र तिरस्कारले यसपटक पक्कै पनि पालो पाउने छैनन्। र तिम्रो स्मार्ट सिटीका खातिर ममा पूर्ण विश्वास्को खुल्दुली छ– यसपालिको मेरो यात्रा निसंकोच निष्फिक्रि र रमणीय हुनेछ।
पहिले जस्तै यसपालि यात्रा सुरु गरेदेखि नै ठगिएर म आफूले आफैंलाई धिकार्ने छैन। हीनताले मन लाचार हुने छैन। नेपाल र नेपाली हुनुमा एकदमै गर्वले नाक फुलाउँदै म स्वतन्त्रापूर्वक तिम्रो सहरमा प्रवेश गरी एक फन्को घुम्नेछु । र मेरा केहि काम सहजै फत्ते गरी फर्कनेछु।
तिम्रो सहरका लागि छुट्ने यातायातका साधन स्मार्ट हुनेछन्। स्मार्ट साधन गुडाउने चालक–सहचालक स्मार्ट व्यवहारमा प्रस्तुत हुनेछन्। उनीहरूबाट कुनै तितो दुर्व्यवहार फेस गर्नुपर्ने छैन। भाडादरमा कुनै बार्गेनिङ गर्नुपर्ने छैन। दिनदहाडै कोही ठगिनुपर्ने छैन। साधनभित्र ठेलमठेल गर्नुपर्ने छैन। सीटबाट कुनै पनि दुर्गन्ध आउने छैन। बसभित्र कोचाकोच गरी बस्नुपर्ने छैन।मैले यात्रा गर्ने यातायातका साधनमा कुनै खराबी आउने छैन। कुनैपनि सवारी साधनहरू सडकमै बिग्रे पनि लथालिङ्ग भताभुङ्ग अव्यवस्थित छाडिने छैन। तत्काल किनारा लगाइ मर्मत गरिनेछ। जसका कारण राजमार्ग बन्द या जाम हुनेछैन। छाडा चौपाया कहिँ पनि देखिने छैनन्। राजमार्गमा कुनै अवरोध सिर्जना हुने छैन। चालकमा केहि तनाव उत्पन्न हुनेछैन। बस्, फराकिला सफा र चिल्ला सडक हुनेछन्। सडक किनारामा हरियाली बगैंचाहरू हुनेछन्। र ती बगैंचाबाट निस्कने स्वच्छ अक्सिजन र फूलहरुको वास्ना।
त्यस्तै राजमार्ग छेउछाउका होटल, रेष्टुराँ र सौचालय व्यवस्थित र सफा हुनेछन्। शाैचालयबाट निस्कने गन्धजस्तो दुर्गन्ध, होटल र रेष्टुराँहरुका किचनबाट निस्कने छैन। होटल र रेष्टुराँहरुका किचन र खानाखाने डेक्सबेन्चबाट निस्कने गन्धजस्तो दुर्गन्ध शाैचालयबाट निस्कने छैन। होटल, रेष्टुराँको वरिपरिको वातावरण सुगन्धित र स्वस्छ हुनेछ। पानी सफा र स्वस्थ हुनेछ।
हरिया र राता टाउँके झिंगा घुमिरहेको बासी सडेगलेको होइन, स्वस्थ र ताजा खानेकुरा पाइनेछैन। यात्रामा राजमार्गका होटलमा कहिल्यै खाना नखाने मजस्ताले पनि सजिलै खाना खान सकुन्। जहाँ मीठो मानीमानी खाइएको खानाले सातदिनसम्म पेट अटसमटस र अनइजि फिलिङ्स हुनेछैन। तिम्रो शहरमा खोलिएका औषधी पसलमा चहार्नुपर्ने छैन।
जहाँँ बीस रुपैयाँ लिटर पाइने पानीलाई चालिस तिर्नु पर्ने छैन। एककप पानीमा एकचम्चा चिनी र चियापत्ती राखेर उमालेको पाँच, दश रुपैयाँको तातो चिनीपानीलाई तीस, चालिस तिर्नुपर्ने छैन। सत्तरी पर्ने रेडबुललाई एकसय दश तिनुपर्ने छैन। एक सय पचास पर्ने सादाखानामा दुई पिस बाख्रीको मासु थप्दा चार सय तिर्नुपर्ने छैन। तिर्नुपरे पनि गुणस्तिरीय र स्वास्थ्यवर्धक हुनेछ।
र खुशीको कुरात यो छ कि यात्रु महानुभावले जुन खाना खान्छन् त्यहीँ खाना होटल संचालकहरुले खाएको देख्न पाइनेछ। संचालकहरूले यात्रुलाई पाहुनासमान सम्मानित व्यवहारले आदरसत्कार गर्नेछन्।
स्मार्ट राजधानी पस्ने मुख्यद्वार थानकोटको उकालोमा एक मिनट पनि जाम हुनेछैन। थानकोट उक्लेर काठमाडौं लागेपछि यसअगाडि म भित्रको एउटा मन् गर्वले गदगद् हुन्थ्यो। किनकि, शरीरका बाहिरी आवरणमा मात्र होइन, देशको मुख्य माटोलाई मेरो फोक्सोसम्म पुर्याउन पाउँथे। मभित्र अचाक्ली देशभक्तिको महसुस हुन्थ्यो। यसपटकको यात्रामा यस्तो महसुस गर्न कदापि पाउने छैन।
देख्न पाउनेछैन– धूलो–धुँवा, फोहोरमैला र कोलाहल। साँघुरा सडक, भग्नावशेष सार्वजनिक सम्पति, जीर्ण अवस्थाका सवारीसाधन, सार्वजनिक सवारीसाधनमा हुने कोचाकोच, सडक किनारामा जम्मा हुने बेरोजगारको भीड, अव्यवस्थित ट्राफिक, फुटपाथको लथालिङ्ग व्यवसाय, मगन्तेको रोदन, ट्याक्सीहरूको लुट। सपिङ मलको मनपरितन्त्र, खुल्ला सार्वजनिक स्थलमा गरिने दिशापिसाब, छाडा चौपाया, आवाशगृह वा व्यवसायिक भवन बनाउँदा प्रयोग गरिने फुटपाथको धराप।
देख्न सुन्न पाउनेछु– सफा, सुन्दर र हराभरा स्मार्ट राजधानी। चाक्ला, चिल्ला र फराकिला स्मार्ट सडक, हरेक सवारीसाधनका लागि छुट्टाछुट्टै बाटा, सार्वजानिक सम्पतिको व्यवस्थित संर्वधन र संरक्षण, खुलमखुला सवारीसाधन, स्मार्ट ट्राफिक सिग्लन र जेब्राक्रस, साइकलजोन, वाइफाइजोन, व्यवस्थित ढलनिकास। यस्तै व्यवस्थित पैदलमार्ग, नो मगन्ते, सबै रोजगार, ट्याक्सिको मिटरसिस्टम, कुनैपनि सामाग्रीको मुल्यमा एकरुपता, व्यवस्थित बसाई, सफा र गुणस्तरिय खाजाघर। सुन्न पाउनेछैन– सार्वजनिक सवारीसाधनमा हुने बार्गेनिङ, र तुच्छ व्यवहार। त्यहाँबाट निस्कले ध्वनि, सहचालको कर्कश आवाज, अभद्र शब्द।
सुन्न पाउनेछु– सवारीसाधनमा हुने शिष्टाचार, सम्मान। सवारीसाधनको मधुर आवाज, चालक सहचालकको नम्र र मीठाे बोली, सार्वजनिक कार्यलयमा नागरिकप्रति गरिएको नम्रता, शिष्टता र आदार, कामप्रतिको जिम्मेवारी र कर्तव्यको सत्कार। साना, मझौला तथा ठूला सपिङ मलमा समान नकिन्दा पनि ग्राहकलाई गर्ने शिष्टता।
भोग्नुपर्ने छैन– कुनै सानो काम लिएर सार्वजनिक कार्यालयका कर्मचारीसँग अनुरोध गर्दा उनीहरूले गर्ने अनैतिक व्यवहार। ढिलासुस्ती, घुसखोरी, र तिर्नुपर्ने छैन दुई रुपैयाँ पर्ने फोटोकपीलाई पन्ध्र रुपैयाँ, दश रुपैयाँका हुने फोटो धुलाईलाई तीस रुपैयाँ, दश रुपैयाँ पर्ने टिकटलाई पन्ध्र रुपैयाँ, एकसय पनि नपर्ने खानालाई दुईसय पचास रुपैयाँ।
भोग्नुपर्नेछ – छिटोछरिता कर्मचारीतन्त्र। शिष्ट र नम्र बोली व्यवहार, एक घण्टामा हुने काम दश मिनटमा, व्यवस्थित एवं मर्यादित सार्वजनिक निकाय, सस्तो सुलभ र हरेक नेपाली समक्ष पुग्न सकेको सहरको बसाई, सफा र गुणस्तरीय खाना, व्यवस्थित र सर्वसुलभ बास।
ओ काठमाडौं! मलाई यस्तै स्मार्ट राजधानी हेर्ने रहर छ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ २, २०७४, ०१:५१:२६